प्रचण्डलाई ‘रअ’ को धम्कीः ‘छोरा प्रकाशको बेडमा पुगेको त थाहा होला नि ?’ — OnlineDabali
प्रचण्डलाई ‘रअ’ को धम्कीः ‘छोरा प्रकाशको बेडमा पुगेको त थाहा होला नि ?’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतीय जासुसी संस्था ‘रिसर्ज एण्ड एनालाइसिस विङ्ग ‘रअ’ का प्रतिनिधिले धम्की दिएको खुलासा भएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड तयार नभएपछि रअले धम्की दिएको हो । उसले काँग्रेसको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न दवाव दिएको थियो । माके अध्यक्ष प्रचण्डले आफू तत्काल वाम गठबन्धन तोड्न सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै काँग्रेस र ‘रअ’को प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि रअका प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई धम्की दिएको स्रोत दाबी छ ।
“एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्री पाइन्छ ? भन्दै रअका प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्ड अकमकाउँदै तत्काल वाम गठबन्धन तोड्न नसक्ने बताएपछि उनीहरुले आक्रोशित भएका थिए” स्रोतले अनलाइन डबली डटकमसँग भन्यो । उपचारको क्रममा हङकङमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्ने ‘रअ’ का एजेन्टमध्येका एक भएको स्रोतले बतायो ।
सोही क्रममा प्रचण्डलाई नेपालमा भारतको इसाराबेकर सरकार गठन हुन नसक्ने र भएमा धेरै समय नटिक्ने घुमाउरो चेतावनी दिइएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफूहरुलाई वाम एकता र वाम सरकारको एजेण्डामा जनताले मत दिएको धारणा राखेको र सोलगत्तै रअका प्रतिनिधिले “तपाईँको छोरा बेडमा हामी पुगेको कुरा तै थाहै होला नि ?” भन्दै प्रचण्डलाई मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक धम्की समेत दिएका थिए । यो कुरा प्रचण्डले पार्टीको केही विश्वासपात्रहरुलाई समेत शेयर गरेको बताइन्छ । रअको धम्कीपछि प्रचण्ड निकै दवावमा रहेका छन् ।
उपचारका सिलसिलामा एजेन्टसँग भेट गरेपछि यता ओलीले भारतसँग नरम बनेको र सोहीमुताविक उनैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रुपमा स्वराजलाई नेपाल बोलाएको स्रोतको दाबी छ । सो कुरा ओलीले स्वराजसँग सोल्टी होटलमा गरिएको भेटपछि स्वराजको नेपाल भ्रमण कसको निम्तामा भएको ? भन्ने पत्रकारको जवाफमा ‘मैले बोलाएको हुँ’ भन्ने मसिनो स्वरमा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
त्यसअघि भारतको स्वार्थलाई आफूले सधैं कुल्चँदै आएको र आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ बताउने ओली बैंककमा उपचार गरेर फर्किएयता मोदीसँग टेलिफोन वार्ता समेत भइसकेको छ । उक्त टेलिफोन समेत मोदी नभई ओली स्वयम्ले गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । तर, बालकोटस्थित ओली निवासबाट भने मोदीले नै ओलीलाई फोन गरेको दाबीसहित सामाचार दिइएको थियो । स्वराजको भ्रमणपछि ओली र प्रचण्ड पार्टी एकताबारे निर्णयमा पुग्न निकै अप्ठ्यारोमा परेको बताइन्छ ।
स्मरण रहोस् गत मंसिर २ गते राति प्रचण्डका एक्ला पुत्र प्रकाश दाहालको ‘रहस्यमय’ मृत्य भएको थियो । प्रचण्ड प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनको प्रचारप्रसारको बेला राजधानीको लाजिम्पाटस्थित निवासमा उक्त रात एक्लै सुतेको बेला कोठामा प्रकाशलाई शरीर चिसो अवस्थामा भेटिएको बताइएको थियो ।
उपचारका लागि थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टर नेश्नल हस्पिटलमा पुर्याइएको र तत्कालै हस्पिटलले प्रकाशको मृत्यु केही घण्टापहिल्यै भएको जनाएको थियो । त्यसलगत्तै प्रकाशको मृत्यु ‘षड्यन्त्रमूलक’ भएको भन्दै छानबिनको माग सर्वसाधारण तहबाटै भएको थियो । जसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । प्रकाशको शवको पोष्टमार्टम नगरी अन्त्येष्टी गरिँदा थप शंका पैदा भएको थियो । रअका प्रतिनिधिको धम्कीले त प्रकाशको मृत्युबारे पनि नयाँ धारण विकास गराएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पटक पटक वाम गठबन्धन तोड्‍न अाफूलाई ठूलो दवाव अाएको बताउँदै अाएका छन् ।
भ्रष्टाचारी प्रध्यानध्यापक थापालाई अखिल क्रान्तिकारीले दल्यो कालोमोसो
एमाले र माआवादीको एकता हुँदैनः जबरा